The information on this page has been compiled with the help of the following people: SarcoidosisUK Norwich Support Group, SarcoidosisUK Nurse Jo Whight; ဒေါက်တာအမ် Wickremasinghe, Consultant Respiratory Physician and Sarcoidosis Lead at Imperial College Healthcare NHS Trust and ဒေါက်တာအိပ်ချ် Adamaliမြောက်အမေရိက Bristol က NHS Trust မှမှာအတိုင်ပင်ခံအသက်ရှုလမ်းကြောင်းသမားနှင့် Sarcoidosis ခဲ။
ပုဒ်မ 1: အခြေခံ
Sarcoidosis (အသံထှကျ sar-coy-do-sis), also known as ‘sarcoid’ or ‘sarc’, is an inflammatory disease that can affect any organ(s) in the body. Sarcoidosis is most commonly found in the lungs, lymphatic system (including lymph glands) and the skin. Small nodules of inflammation or scarring called granulomas form in the affected organ. These granulomas can create problems with the proper functioning of that organ.
ဆက်ဖတ်ရန်: Sarcoidosis အကြောင်း
Sarcoidosis UK မှာ 10000 နှုန်းနှင့် ပတ်သက်. 1-2 လူတွေကိုသက်ရောက်သည်။ ထို့ကြောင့်ရှားပါးရောဂါအဖြစ်ခွဲခြားထားပါသည်။ တစ်ဦးနှိုင်းယှဉ်အဖြစ်, cystic fibrosis 10000 နှုန်းဝန်းကျင် 0.7 ကလူအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် Down ရဲ့ Syndrome န်းကျင်910000 နှုန်းသာသက်ရောက်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: '' အဘယ်သူသည် Sarcoidosis ဖွံ့ဖြိုး? ', Sarcoidosis အကြောင်း
အပြည့်အဝသက်သေပြခဲ့ကြအဘယ်သူအားမျှသော sarcoidosis ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဘယ်သို့သောအကြောင်းတော်တော်များများသီအိုရီရှိပါတယ်။ ထိုကြောင့်အကြောင်းမရှိနေဆဲမသိသောနေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်သူကယေဘုယျအားဖြင့် sarcoidosis အမည်မသိပစ္စည်းဥစ္စာအားဖြင့်အစပျိုးသောကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်တစ်ခုလွန်တုံ့ပြန်အဖြစ်ကရှင်းပြသည်စေခြင်းငှါသဘောတူညီခဲ့သည်။
ဤသည်ခလုတ်ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်ကနေဒါမှမဟုတ်တခြားပြည်တွင်းရေးရောဂါကူးစက်မှုကနေလာနိုင်ဘူး။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ကောင်းသူတို့ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်ခံရဖို့ကပိုများပါတယ်ဆိုလိုရာအချို့မျိုးဗီဇသူတစ်ဦးချင်းစီကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: အဆုတ် Sarcoidosis, Diagnosis နှင့်ကုသရေး, Mayo Clinic ဆေးခန်း, pg 947
က sarcoidosis ဖမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော
လူများကတစ်ဦးကူးစက်တတ်သောရောဂါမဟုတ်ပါ, sarcoidosis ဖမ်းလို့မရပါဘူး။ အခြေအနေကိုလူတစ်ဦးမှအခြားမှလွန်နိုင်အကြံပြုစရာသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။
ရှားပါးကိစ္စများတွင် sarcoidosis မိသားစုများအတွက် run ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ ဒါဟာရောဂါဖြစ်နိုင်ချေမျိုးရိုးဗီဇဒြပ်စင်ကြောင့်ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည်။
Sarcoidosis ကတစ်ပြိုင်နက်တည်းတစ်ခုထက် ပို. ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုသို့မဟုတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကို system ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည် multi-စနစ်တကျရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်အသုံးအများဆုံးဒေသများအဆုတ်နဲ့ (lymph ဂလင်းအပါအဝင်) ကိုဖဲသည့်စနစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီ 'အဆုတ် sarcoidosis' 'အဖြစ်လူသိများသည်, sarcoidosis လူနာ 90% သည်ဤလမ်းအတွက်ထိခိုက်နေကြသည်။
သို့သော်ရောဂါနီးပါးမည်သည့်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်, တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိခိုက်စေ (s) ကိုအဆုတ်ထက်အခြား - လူနာ 30 ခန့်% '' အပိုအဆုတ် sarcoidosis '' ရပါလိမ့်မယ်။ အသည်းရောဂါအထိ 70% အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်မှု (လူနာအများစုအဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေပြသပေမယ့်), အရိုးနှင့်ပူးတွဲ sarcoidosis လူနာ 40% သာသက်ရောက်သည်ရှိ၏ အသားအရေနှင့်မျက်စိ sarcoidosis တစ်ခုချင်းစီကိုလူနာ 25-30% သာသက်ရောက်သည်။ Sarcoidosis ကိုလည်းအာရုံကြောစနစ်, နှလုံး, endocrine စနစ်နှင့်ကျောက်ကပ် (အားလုံး <လူနာရဲ့ 10%) ကိုအကျိုးသက်ရောက်ရန်လူသိများသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: SarcoidosisUK လူနာပြန်ကြားရေးလက်ကမ်းစာစောင်များ
ဘယ်လို sarcoidosis ကွဲပြားခြားနားသောလူကိုထိခိုက်စေသနည်း?
ဤမေးခွန်းကိုရန်မတိကျတဲ့အဖြေရှိပါသည်။ တူညီသောရောဂါနှစ်ခုလူနာကွဲပြားခြားနားသောအချိန်ကာလကိုကျော်ပြင်းထန်မှုအမျိုးမျိုးအဆင့်ဆင့်မှာရောဂါလက္ခဏာတွေကွဲပြားကြပေမည်။ လူနာကြီးမားသောနံပါတ်များကိုလေ့လာခဲ့ကြသောအခါထပြသသောရောဂါလက္ခဏာအချို့ဘုံပုံစံများရှိပါတယ်။ သို့သော်လူနာယေဘုယျအား sarcoidosis ၏အလွန်တစ်ဦးချင်းအတွေ့အကြုံရှိသည်။ sarcoidosis အတူအခြားအခွအေနမြေား၏ရှေ့မှောက်တွင်လူနာကြားကအတှေ့အကွုံအတွက် ပို. ပင်ခြားနားချက်ကိုဆိုလိုသည်။
Read more: '' sarcoidosis ၏ရောဂါလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ? ', အမေးအဖြေများ, ပုဒ်မ 2
Read more: '' အခြားကျန်းမာရေးအခြေအနေများ sarcoidosis နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်ဘာလဲ? ' အမေးအဖြေများ, ပုဒ်မ 4
ဆက်ဖတ်ရန်: What isarare disease?
ဆက်ဖတ်ရန်: Sarcoidosis listing on the Orphanet database of rare diseases.
ပုဒ်မ 2: နေ့မှနေ့
sarcoidosis ၏ရောဂါလက္ခဏာအင်္ဂါပါဝင်ပတ်သက်လျက်ရှိသောပေါ် မူတည်. ကျယ်ပြန့်ခြားနားသည်။ ကမျိုးစုံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက် sarcoidosis ကြောင့်ထိခိုက်ခံရဖို့ဘုံဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, ဒီလိုလူနာအများအပြားမဆိုထပ်မံလက္ခဏာတွေတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆုတ်ပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအများစုကလူနာတွေ, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏အသက်ရှုခြောက်သွေ့မြဲချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ရင်ကြပ်တိုင်ကြား။
အဆုတ်: ချောင်းဆိုးခြင်း, အခက်အခဲအသက်ရှူခြင်း (အသက်ရှူမမှန်), ရင်ဘတ်အတွက်အသံပြာသို့မဟုတ်ခြောက်သွေ့သောသူ၏အသံမှာ, အီ, နာကျင်မှုသို့မဟုတ်၌လည်းညှိုးငယ်ခြင်း, အိပ်ပျော်ခြင်း (အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်) စဉ်အတွင်းအသက်ရှုခြင်းနှင့်ခက်ခဲအသက်ရှုမဝြခင်း။
အသားအရေ: ကိုလည်းတွေ့ရှိရပါသည်အဖြစ်လူသိများယားယံနူးညံ့သော, ဖြစ်အံ့သောငှါအရေပြားနီပြန်တယ်သို့မဟုတ်ပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများ။
မျက်စိ: ရောဂါလက္ခဏာများ (အောက်တွင် link ကိုကြည့်ပါ) sarcoidosis ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သက်ရောက်မှုဘယ်လောက်ပေါ် မူတည်. ခြားနားသည်။ သို့သော်ဤသည်မျက်စိနီခြင်းန်းကျင်နာကျင်မှုနဲ့ဖိအားပါဝင်နိုင်ပါသည်; ခြောက်သွေ့သောသို့မဟုတ်ယားယံမျက်စိ; မှုန်ဝါးသို့မဟုတ် segment ရူပါရုံကို, အနက်ရောင်အစက်အပြောက်, အလင်းမှ sensitivity ကို။
ဖဲစနစ်က: ကျယ်ဝန်းနှင့်အနာတုံးမှာတက်စေ့လည်ပင်း, ဂျိုးကြား, ရင်ဘတ်သို့မဟုတ်ပေါင်ခြံများတွင် glands ။
အဆစ်နှင့်ကြွက်သား: တစ်ခါတစ်ရံတွင်အနီရောင်အဆင်းအရောင်နှင့်ကြွက်သားဒေသများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘိုနီဒေသများရှိကိုက်ခဲခြင်းနှင့်ဝဒေနာ, တောင့်တင်းခြင်းနှင့်မာကျောမှု, ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်နူးညံ့သောအဆစ်။
နှလုံး: ပုံမှန်မဟုတ်သောနှလုံးစည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့တစ်ခုမမှန်သွေးခုန်နှုန်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, နှလုံးပျက်ကွက်, နှလုံးန်းကျင်ရောင်ရမ်းခြင်း, ခေါင်းမူးစာလုံးပေါင်း, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုများ။
ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်: အာရုံကြောနာကျင်မှုကို, ထိုကဲ့သို့သောမှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်မြူဆိုင်းလျက်ရှိသောစိတ်ကိုအဖြစ်သိမြင်မှုပြဿနာများ, အရှုံးကြားလျှင်, လက်ချောင်းများနှင့်ခြေချောင်းများတွင်ထုံ (အရံ neuropathy), သိမ်းယူမှု။
ကျောက်ကပ်: အသှေးကို (hypercalcemia) တွင်အလွန်အမင်းကယ်လစီယမ်နှင့်ဆီး (hypercalciuria) တွင်အလွန်အကျွံကယ်လစီယမ်, ဖြစ်နိုင်သမျှကျောက်ကပ်ကျောက်များ။
အသည်း: အများစုမှာလူနာများအဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေခံစားရသည်။ ပတ်ပတ်လည် 20% တစ်ခုသည်လည်းကျယ်ဝန်းအသည်းရှိသည်။ တချို့ကလူနာအထက်, ညာဘက်ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာနူးညံ့ကြင်နာမှုသို့မဟုတ်နာခံစားရသည်။
အချို့လူများက, ရုတ်တရက်စတင်ရန်ပြင်းထန်ဖြစ်ကြပြီးမှသာအချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလကြာရှည်ပေးသောစူးရှသောရောဂါလက္ခဏာအတူခံရပေမည်။ အခြားသူများကိုရောဂါလက္ခဏာတွေအချိန်တစ်အများကြီးပိုရှည်ကာလအတွင်းတဖြည်းဖြည်းဖွံ့ဖြိုးရှိရာတစ်ဦးထက်ပိုနာတာရှည်အခွအေနေပေမည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: SarcoidosisUK လူနာပြန်ကြားရေးလက်ကမ်းစာစောင်များ.
ဘယ်လို sarcoidosis နေ့စဉ်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း?
ဘယ်လို sarcoidosis တစ်ဦးချင်းရဲ့ဘဝအပေါ်သက်ရောက်မှုအများအပြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ,, အခြားမည်သည့်တည်ဆဲအခြေအနေများသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှုနှင့်တစ်ဦးချင်း, ဆေး (s) ကိုမှတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကနေရရှိနိုင်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ထောက်ခံမှုများကျန်းမာရေးယုံကြည်ချက်ရောဂါ၏အမျိုးအစားနှင့်ပြင်းထန်မှုထိခိုက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်း (s) ကို ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထောက်ခံမှုကွန်ယက်ကို။
sarcoidosis နေ့စဉ်ဘဝအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်သုံးမျိုးကိုအခြေခံနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်လက်တွေ့ကျကျ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ, အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့, အလုပ်နှင့်လူမှုရေးအပါအဝင်အသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုသိသာသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်။ ဆေးကဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ Sarcoidosis စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတစ်ဦးချင်းအကျိုးသက်ရောက်စေတော်မူမည် အချို့သောလူနာစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါသို့မဟုတ်အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ လက်တွေ့ကျကျ, sarcoidosis အလုပ်အကိုင်နှင့်ငွေကြေးအခက်အခဲမှတဆင့်နေ့စဉ်ဘဝ impact လိမ့်မည်။
ဤအအပြန်အလှန်အချက်များတစ်ခုချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျယ်ပြန့်သည့်ရောဂါ၏တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံအပေါ်အခြေခံသည့်ကွဲပြားမည်သည့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါထိခိုက်နေကြသည်။ လူတိုင်းကွဲပြားခြားနားထိခိုက်ပါလိမ့်မည် - ဒါဟာအဘယ်သူမျှမ `တဦးတည်းရဲ့အရွယ်အစား sarcoidosis နှင့်အတူ all` ကိုက်ညီရှိကွောငျးမှတ်မိဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
တိကျတဲ့အစားအသောက်များတွင် sarcoidosis နှင့်အတူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုထောကျပံ့ကူညီပေးနိုငျသနညျး
Sarcoidosis ရောဂါလက္ခဏာတွေကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောင်ရမ်းခြင်း၏ဖြစ်ပျက်။ Anti-inflammatory အစားအစာများအတွက်ပေါများတဲ့အစားအသောက်ကိုစားခြင်းဖြင့်ရောဂါပြီးစနစ်ကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့် '' အေးဆေး '' ရန်ကူညီပေးနိုင်သည်။ ဤသည်ထို့နောက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချစေနိုင်သည်။ ဒီနည်းပညာကာလတိုအတွက် sarcoidosis လက္ခဏာတွေများ၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်များအတွက်ရေရှည်တားဆီးကာကွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဆီသို့ဦးတည်ပံ့ပိုးဖို့ကူညီလိမ့်မည်။ ဤသည်တားဆီးကာကွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဥပမာမီးတောက်-ups ၏လျော့နည်းအခွင့်အလမ်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်နိုင်သည်။ anti-inflammatory အစားအစာများကိုသူတို့က antioxidants, သတ္တုဓာတ်နဲ့ကျန်းမာကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်မရှိမဖြစ်သောကျန်းမာအဆီများအများကြီးဆံ့ဓာတုပစ္စည်းနောက်ထပ်သို့မဟုတ်ဆက်ပြောသည်သကြားခြင်းမရှိဘဲ, ယေဘုယျအားဖြင့် unprocessed ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့၏မြေတပြင်လုံးအစာအာဟာရပြည်နယ်ဆိုလိုသည်မှာ wholegrains, အရေခွံ-အပေါ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စသည်တို့ကိုအတွက်ကိုလောင်လေ၏။
ဘယ်လိုဗီတာမင် D ကို sarcoidosis အကျိုးသက်ရောက်စေသနည်း?
တခါတရံမှာ sarcoidosis လူနာ corticosteroids ၏သက်ရောက်မှု thinning အရိုးများ၏သက်ရောက်မှုများတိုက်ဖျက်ဖို့ဗီတာမင် D ကိုသို့မဟုတ်ကယ်လစီယမ်ဖြည့်စွက်အကြံပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ လူအများစုအဘို့, ကယ်လစီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုဖြည့်စွက်အလွန်လုံခြုံသော်လည်း, sarcoid နှင့်အတူအချို့သောလူများအတွက်, အန္တရာယ်အသှေးကိုကယ်လစီယမ်အဆင့်ကိုအတူခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1 10 လူနာများအတွက်ရှုမြင်တိုးမြှင်ကယ်လစီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D တစ်ခု၏အသှေးကိုအဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်ဖြည့်စွက်တဲ့အန္တရာယ်လည်းမရှိ sarcoidosis ။ ဗီတာမင် D ကိုအဆင့်ဆင့်လေ့အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်တိုင်းတာလျက်ရှိသည်။ သင့်ဆရာဝန်ကောင်းကောင်းတစ် PHT စမ်းသပ်မှုနှင့်သင်၏ဗီတာမင် D နှင့်ကယ်လစီယမ်အဆင့်ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျ sarcoidosis ရှိပါကသင်ဗီတာမင် D နှင့်ကယ်လ်စီယမ်ဖြည့်စွက်တာကနေဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုခံစားရမယ်လို့တစ်ခုတိုးအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ဒါဟာဖြစ်ပါသည် မရှိမဖြစ် သင်မည်သည့်ဖြည့်စွက်မစတင်မီတိုင်းတာသင့်ရဲ့ကယ်လစီယမ်နဲ့ဗီတာမင် D ကိုအဆငျ့ရှိသည်, သင်ကုထုံးအပေါ်ဆက်လက်တည်ရှိနေတုန်းကဤအဆင့်ကိုစောင့်ကြည့်နေကြသည်။ အမြဲတမ်းသူတို့သင်သည်မည်သည့်ကယ်လစီယမ်သို့မဟုတ်ဗီတာမင် D ကိုဖြည့်စွက်ရှိသည်, သံသယ၌သင်တို့၏ sarcoidosis အထူးကုနှင့်အတူဆွေးနွေးရန်လျှင်အကြံပြုလျှင်သင် sarcoidosis ရှိသည်သောသင်၏ဆရာဝန်မှဖော်ပြထားခြင်း။
ဆက်ဖတ်ရန်: Sarcoidosis နှင့်ကယ်လ်ဆီယမ်နှင့်ဗီတာမင် D ကို - လူနာပြန်ကြားရေးလမ်းညွှန်
ဤမေးခွန်းကိုနှင့်အတူအကူအညီတောင်းဒေါက်တာကေ Bechman, ဒူထာဗေဒ, ဓမ္မရာဇဝင်ကောလိပ်ဆေးရုံသို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
sarcoidosis မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကြောင်းအကြံပြုဖို့အနည်းငယ်သာသက်သေအထောက်အထားများရှိပါသည်။ ရံဖန်ရံခါသို့သော်ယောက်ျားမျိုးပွားမှုစနစ်ကတစ်ဦး testicular အစုလိုက်အပြုံလိုက် (es) ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။ မိန်းမတို့အဘို့, sarcoidosis ဟော်မုန်းမညီမျှမှုကြောင့်ရာသီမမှန်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ဦးက endocrinologist ဖြစ်သူလို့ခေါ်တဲ့အထူးကုမှတစ်ဦးလွှဲပြောင်းသည်ဤကိစ္စများတွင်အကြံပြုသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: Sarcoidosis နှင့်ကလေး
အကျိုးခံစားခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသည် sarcoidosis နှင့်အတူလူဖြစ်ပါသလား
Sarcoidosis တစ်ဦးအသက်ကန့်သတ်ရောဂါထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းခွင်နှင့်ပင်စင်ဦးစီးဌာန (ဒီကသင်၏တိကျတဲ့ရောဂါနှင့်ရောဂါလက္ခဏာပေါ်မူတည်) ကထိုကြောင့်မသန်စွမ်းနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့်သင်သည်သင်သည်သင်၏ sarcoidosis ကနေရရှိလာတဲ့မဆိုဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီရန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ပိုပြီးအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားခွင့်ရှိသည်နိုင်ပါသည်။ ကံမကောင်းစွာ SarcoidosisUK စိတ်ကြိုက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအကြံဥာဏ်သို့မဟုတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုန်ဆောင်မှုများကိုရရှိနိုင်ပါသည်အရင်းအမြစ်မရှိပါ။ သငျသညျအောက်ကစာမျက်နှာပေါ်တွင်ပြင်ပလင့်များကို အသုံးပြု. ဤဝန်ဆောင်မှုများရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို sarcoidosis အလုပ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ကိုထိခိုက်သနည်း?
Sarcoidosis နည်းလမ်းတွေထဲကတစ်အရေအတွက်အလုပ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီတဦးချင်းများအတွက်ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်အချိန်ကျော်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ အတော်များများက sarcoidosis လူနာသူတို့အလုပ်သူတို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်တောင်းဆိုမှုများမဟုတ်ပါဘူးအထူးသဖြင့်လျှင်, ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ကြသည်။ အခြားသူများကဖြစ်ကောင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့ pacing နှင့်ဆေးရုံချိန်းနှင့်ဖျားနာခွင့်များအတွက်အချိန်ပိုမိုခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်သူတို့၏အလုပ်လှုပ်ရှားမှုများပုံမှန်ဖြစ်သွားဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်။ တချို့ကကတခြားလူနာ sarcoidosis အတူလုပ်ကိုင်မှာအားလုံးမဖြစ်နိုင်ပါကြောင်းရှာပါ။ ဒီအမှုဖြစ်လျှင်, မသန်စွမ်းအကြိုးခံစားခှငျ့နှင့်ဘဏ္ဍာရေးထောက်ပံ့မှုကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ အားလုံး sarcoidosis လူနာတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသူတို့ရဲ့အလုပ်ရှင်နဲ့စကားစတင်ရန်အဘို့အဒါဟာအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အလုပ်အချိန်ဇယားသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့ချိန်ညှိကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုလုပ်များနှင့်အကောင်းဆုံးသူတို့ကိုကိုက်ညီမယ့်စွမ်းရည်အတွက်အလုပ်မှာဆက်နေရန်လူနာကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: အလုပ်ရှင်များလက်ကမ်းစာစောင်များများအတွက် SarcoidosisUK သတင်းအချက်အလက်
Sarcoidosis ဆေးညွှန်းစွဲချက်ပေးဆောင်နေတဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကင်းလွတ်ခွင့်မဟုတ်ပါဘူး။ ဤသူသည်သင်တို့အခြားကင်းလွတ်ခွင့်အမျိုးအစားများထဲမှအောက်မှာစွဲချက်မှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်မဟုတ်လျှင်သင်ဆဲဆပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်ကိုဆိုလိုသည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျတခုနှစ်ပတ်လည်သို့မဟုတ်သုံးလတစ်ကြိမ်ဆေးညွှန်းကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းလက်မှတ် (PPC) ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့်သင့်ဆေးဝါးများကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်ကိုသုံးပါနှင့်အကြံပေးချက်ကိုအဘို့သင့်ဆေးဝါးမေးကြည့်ပါ။
Read more: နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ PPC နှင့်ဆေးညွှန်းကင်းလွတ်ခွင့်အားသွင်းပေးပါတယ်။
မောပန်းခြင်း isacommon symptom of sarcoidosis, affecting up to 70% patients. Insomnia (difficulty falling or staying asleep) and sleep apnoea (shallow breathing during sleep) may both contribute to fatigue. There is evidence to suggest that sarcoidosis patients are more likely to experience insomnia and sleep apnoea. However it is not known if sarcoidosis causes insomnia and sleep apnoea directly or if it is due to one, oracombination of, other factors. These factors could include the inflammation in the body, mental health problems such as stress or side effects of treatment.
ဆက်ဖတ်ရန်: NHS information on excessive sweating.
ပုဒ်မ 3: Sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်ခြင်း
ဘယ်လောက်ကြာ sarcoidosis ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်တက်ကြွစွာဆက်လက်တည်ရှိကြမည်နည်း
ဤမေးခွန်းကိုမရှိအတိအကျအဖြေရှိပါသည်။ အများဆုံးလူနာတွေအတွက် Sarcoidosis 1 -2 နှစ်အတွင်းထွက်မီးရှို့မည်သူတို့မျှထပ်မံပြဿနာများရှိပါလိမ့်မယ်။ တချို့ကလူနာတွေကိုဆေးကုသမှုလိုအပ်, ပြီးတော့လွှတ်ရာသို့သွားလော့အောက်တွင်မြင်ရလိမ့်မည်။ အချို့သောအခြားလူနာတွေအတွက်အခြေအနေကိုနာတာရှည်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်သူတို့အောက်တွင်ကြည့်ပါ, အခြိနျမှနျမှမီးတောက်-ups ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကြာကြာတစ်ဦးလူနာ, နာတာရှည် sarcoidosis နှင့်အတူသူတို့လွှတ်သို့သွားဖြစ်ကြ၏လျော့နည်းဖွယ်ရှိထိခိုက်ခဲ့ရသည်။
remission အတွက် Going sarcoidosis တက်ကြွစွာအဆင့်ထဲကပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်နှင့်မလှုပ်မရှားဖြစ်လာသည်ဆိုလိုသည်။ အချို့လူများက '' ထွက်မီးရှို့ရာ 'သို့မဟုတ်' 'မြုံသောသဘောကိုမုသာ' 'အဖြစ်ရောဂါကိုဖော်ပြရန်။ သဘောဆောင်သောလွှတ်ဖြစ်ပွားမှု၏ 60-70% ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
စည်းကမ်းချက်များ '' တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း 'သို့မဟုတ်' 'ပြည့်စုံလွှတ်' 'ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်သည်နိုင်ပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွှတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးတိုးတက်နေကြသည်နှင့်ဆေးဝါးဤအချက်မှာမလိုအပ်ပါကြောင်းဆိုလိုသည်။ သို့သော်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုနေဆဲလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ အပြီးအစီးလွှတ်တက်ကြွ sarcoidosis ၏နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်။ သို့သော်ကျန်နေတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာလွှတ်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသသို့မဟုတ်အပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်။ လွှတ်အတွက်အချို့လူများက sarcoidosis နှင့်အတူအခြားပြဿနာဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အခြားသူများကအချိန်ဖို့အချိန်ကနေမီးတောက် ups ခံရပါလိမ့်မယ်။ အနှစ် 30 ကြာပြီးနောက် - sarcoidosis နှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ရှားဆက်လက်ရှိနေရန်နှင့် 20 ကိုယ်နှိုက်ကပြန်လည်ရန်အဘို့အဒါဟာအဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ဦးက '' တက်အိုးပေါကျကှဲ '' sarcoidosis လက္ခဏာတွေရုတ်တရက်အလွန်လျင်မြန်စွာလှုပ်ရှားမှု၏ကာလပြီးနောက်နောက်တဖန် start သို့မဟုတ်သိသာပိုမိုဆိုးဝါးလာသည့်အခါအချိန်ဖော်ပြသည်။ အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုမီးတောက် ups ဖြစ်ပေါ်စေသည်သိသော်လည်း, သူတို့သည်မကြာခဏဖြစ်စေထိုကဲ့သို့သောနာမကျန်းသို့မဟုတ်မတော်တဆမှုအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖိစီး၏ပုံစံထဲမှာ, ခန္ဓာကိုယ်မှဖိစီးနေဖြင့်ရှေ့ပြေးနေကြသည်။ မီးတောက် ups အများအပြားလအတွင်းတ နေ့မှစ. မည်သည့်ကာလကြာရှည်စေနိုင်သည်။
မီးတောက် ups စီမံခန့်ခွဲဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကဘာလဲ?
sarcoidosis အကြောင်းကိုမိသားစု, မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကပညာပေးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကဘာလဲ?
Sarcoidosis မျှလူသိများအကြောင်းမရှိအတူရှားပါးရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ဒါကယေဘုယျအများပြည်သူထံမှအခွအေနနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိအမြင်နှင့်အသိပညာတစ်ခုမရှိခြင်းဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဤသည် sarcoidosis အကြောင်းကို၎င်းတို့၏သူငယ်ချင်းမိသားစုများနှင့်လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်ပညာပေးရန်ရုန်းကန်သူအများအပြား sarcoidosis လူနာတွေအတွက်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့သင် SarcoidosisUK က်ဘ်ဆိုက်၏ညှနျကွား၌သူတို့ကိုထောက်ပြအကြံပြု - ငါတို့သည်သူတို့အခွအေနအေနားလည်ကူညီရန်အရင်းအမြစ်များနှင့်အချက်အလက်များ၏ဥစ္စာဓနရှိသည်။ သင်ဖတ်မှပိုပြီးတိကျတဲ့တစ်ခုခုပေးဖို့အလိုရှိပါလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့သည်ငါတို့၏လူနာသတင်းအချက်အလက်လက်ကမ်းစာစောင်များ၏တဦးတည်းကိုအသုံးပြုဖို့အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အဘယ်အရာကိုထောက်ခံမှု sarcoidosis ပိုမိုလွယ်ကူနှင့်အတူနေထိုင်နေစေရရှိနိုင်ပါသလဲ
ရောဂါခံခြင်းနှင့် sarcoidosis နှင့်အတူနေထိုင်နေတဲ့ကြောက်စရာအချိန်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွအေနေနှင့်ပတ်သက်ပြီးမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုပြောပြရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။ SarcoidosisUK ကျနော်တို့လုပ်နိုင်သမျှလမ်း၌သငျထောကျပံ့ဖို့ကဒီမှာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တစ်ဦးသူနာပြုတိုင်ကြားမှုကို run ။ ဤသည် sarcoidosis ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတွေ့အကြုံရှိသည်သူကို NHS သူနာပြုများအားဖြင့် run နေတဲ့အခမဲ့, လျှို့ဝှက်, တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအခြေအနေကိုပတျဝနျးကငျြဆေးဘက်ဆိုင်ရာမေးမြန်းချက်ဖြေကြားဖို့အပျနှံခဲ့သည်။ သငျသညျအခြို့သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်အာမခံခံယူနှင့်သင်မှတဆင့်သွားနေသောအရာကိုနားလည်သောသူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူသင့်ရဲ့အခွအေနေတဆင့်ပြောဆိုရန်လိုအပ်သလောက်အချိန်ရပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းခေါ်အချိန်စာရင်းထိတွေ့ရယူပါ။
SarcoidosisUK ပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့များဗြိတိန်အနှံ့ဖြည့်ဆည်း။ သူတို့ဟာဖြစ်ကောင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့, sarcoidosis နှင့်အတူအခြားသူများကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလွန်ဖော်ရွေသောနေရာများဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်အလွန်အကြိုးနှင့်တန်ဖိုးရှိသောအတှေ့အကွုံရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာမည် ထောက်ခံမှုအုပ်စုများနှင့်အဘယ်မှာရှိသူတို့ကဒီမှာဖြစ်ပျက်။
SarcoidosisUK လည်းအလွန်တက်ကြွ Facebook စာမျက်နှာနှင့်အွန်လိုင်းဖိုရမ်တစ်ခုရှိသည် - အလားတူအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ကြပေမည်သူကိုရှိတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့အဖွဲ့ဝင်များကအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အွန်လိုင်းအသိုင်းအဝိုင်းကဒီမှာ join ။
ပုဒ်မ 4: စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် Diagnosis
သင် sarcoidosis သငျသညျကိုသာသက်ရောက်ဘယ်မှာပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်ရှိသည်သောတဦးတည်း (s) ကို sarcoidosis များအတွက်ရရှိနိုင်အများအပြားစမ်းသပ်မှုရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဆုတ်န်းကျင်အဆုတ်သို့မဟုတ်ဧရိယာ၌မဆိုမူမမှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အစောပိုင်းတစ်ဦးရင်ဘတ်က X-Ray ရှိဘုံဖြစ်ပါတယ်။ MRI, စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှန် CT scan, PET scan, (ACE အားအဆင့်ဆင့်အပါအဝင်), အသွေးစစ်ဆေးမှုများ, အဆုတ် function ကိုစမ်းသပ်မှုများ, ECG, echocardiogram, bronchoscopy နှင့်တစ်ရှူးခန္: နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေကိုအောက်ပါများထဲမှသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုပါဝင်နိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်အလျားလိုက်အပေါက်ဆီမီးခွက်စာမေးပွဲစိတျနှလုံးသို့မဟုတ်ဦးနှောက်၏သံသယပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်မျက်စိသို့မဟုတ် MRIs ၏ sarcoidosis စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါ သာ. တိကျတဲ့စမ်းသပ်မှု, အထူးသဖြင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သငျသညျစမ်းသပ်မှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလက်ကမ်းစာစောင်များအတွက် sarcoidosis ၏အသီးအသီးအမျိုးအစားနှင့်အတူအသုံးပြုကြသည်ထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုပြီးတွေ့လိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် sarcoidosis အဘို့အမျိုးစုံစမ်းသပ်မှုရှိပါသလဲ
sarcoidosis ဘို့တတိကျသောစမ်းသပ်မှုမျှရှိပါသည်။ Sarcoidosis granuloma နှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည်။ အထူးကုအတိုင်ပင်ခံနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း၏ရှိရာထိုအ granuloma နှင့် / သို့မဟုတ်ဒေသများကိုယ်ခန္ဓာ၌ပေါ်ပေါက်လျှင်အတည်ပြုပေးရန်အမျိုးမျိုးသောစမ်းသပ်မှုတွေကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာထို့နောက်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုအခြားရောဂါကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မဟုတ်ကြောင်းအတည်ပြုမှထပ်မံစမ်းသပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏဖျက်သိမ်းရေး၏လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ကံမကောင်းထိခိုက်မျိုးစုံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနှင့်အတူအထူးသဖြင့်ရှုပ်ထွေးကိစ္စများတွင်အချို့သောအချိန်ယူလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုလူတွေ sarcoidosis ရောဂါလဲ?
စမ်းသပ်မှုနဲ့အခြားဆက်စပ်အခြေအနေမရှိခြင်းကိုအတည်ပြုကြသည့်အခါတစ်ဦးက sarcoidosis ရောဂါများသောအားဖြင့်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ရောင်ရမ်းခြင်း၏ granuloma နှင့် / သို့မဟုတ်ဒေသများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ တချို့ကလူနာအဘယ်သူမျှမလက္ခဏာတွေရှိစေခြင်းငှါပေမယ် sarcoidosis တစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရင်ဘတ်စာမေးပွဲအပေါ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
သူတို့စိုးရိမ်ပူပန်လူနာအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့နိုင်ပါတယ်အဖြစ်အဖြစ်မှန်မှာတော့ sarcoidosis အတိုင်ပင်ခံခဲသောဤအဆင့်ကိုကိုးကားပါ။ သူတို့ကကုသမှုကိုညွှန်ကြားဖို့အသုံးပြုကြသည်မဟုတ်။
ဆက်ဖတ်ရန်: အဆုတ် Sarcoidosis ၏စင်မြင့်တကယ်ဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ?
Many people with sarcoidosis make excess amounts of vitamin D and / orachemical called angiotensin-converting enzyme (ACE). Blood tests can be used to detect high levels of these substances. However, other conditions also cause elevated levels of vitamin D and ACE. Therefore these tests are မဟုတ် regarded as good predictors of sarcoidosis by clinicians in the UK and cannot be used to diagnose sarcoidosis. ACE results certainty should not be used on their own as diagnostic tools and treatment plans should not be administered or modified based solely ona(high or low) ACE result.
ပုဒ်မ 5: ကုသမှု
ကုသမှုကိုဘယ်လိုမကြာမီတစ် sarcoidosis ရောဂါအပြီး start သနည်း?
sarcoidosis နှင့်အတူလူအတော်များများအားလုံးမှာကုသမှုရှိသည်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ တော်ဝင် Brompton နှင့် Harefield Sarcoidosis ဆေးခန်း sarcoidosis ကုသမှုအတွက်တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြောင်းဤသို့ဆို၏
သငျသညျကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထိခိုက်ပျက်ဆီးဘို့ကုသမှုလိုအပ်နေပြုလျှင်, ဒီများသောအားဖြင့်ရက်သတ္တပါတ်အတွင်းစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာနှလုံးသို့မဟုတ်အာရုံကြောပါဝင်ပတ်သက်မှုများအတွက်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: Sarcoidosis ကုသမှုအပေါ်တော်ဝင် Brompton နှင့် Harefield အကြံဉာဏ်
ဆက်ဖတ်ရန်: Sarcoidosis အတိုင်ပင်ခံ Directory ကို
ဆက်ဖတ်ရန်: NHS Patient Choice leaflet
sarcoidosis ကိုပျောက်ကင်းစေပါလိမ့်မယ်မ treatement ရှိပါသည်။ ကုသမှု options များ, ရောင်ရမ်းမှုကိုလျှော့ချရန်ပြုမူမှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်ရောဂါလက္ခဏာသက်သာရာနှင့် sarcoidosis စီမံခန့်ခွဲရန်ကူညီပေးပါမည်။
ကုသမှုအများဆုံး prednisolone, လိုအပ်သော corticosteroids ဖြစ်တဲ့အခါ, (ထိုကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါဒါမှမဟုတ်အဝလွန်အဖြစ်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုမှမဆို contraindications ရှိပါတယ်မဟုတ်လျှင်) များသောအားဖြင့်ဆေး၏ပထမဦးဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါရောင်ရမ်း supressing အားဖြင့် Corticosteroids အလုပ်။ တစ်ဦးကအမြင့်ဆုံးထိုးများသောအားဖြင့်တစ်ဦး '' ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထိုး '' လျှော့ချမခံရမီ, ကုသမှုရဲ့ start မှာသတ်မှတ်ထားသည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေး၏အသုံးပြုမှုကိုကူညီပံ့ပိုးရန်သုတေသနအထောက်အထားများကိုအများကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော် steroids များစွာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအမြင့်ဆုံးကြိမ်အတွင်းခေါ်ဆောင်သွားအထူးသဖြင့်အခါ, ရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားအလေးချိန်အမြတ်နဲ့စိတျအပွောငျးအလဲအနေဖြင့်အရိုးပွရောဂါနှင့်အိပ်မပျော်အထိ။
Clinician ကိုလည်း ပို. ပို. ထိုကဲ့သို့သော Methotrexate, Hydroxochloroquine နှင့် Azithioprine ကဲ့သို့သောအခြား Non-တီးရွိုက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဖိနှိပ်မှုဆေးဝါး အသုံးပြု. ရသည်။ တနည်းကား, ထိုအသီးအသီးအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏ကိုယ်ပိုင်အစုံရှိပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုကုသမှုဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် sarcoidosis ၏တိကျသောသဘာဝအပေါ်အခြေခံများနှင့်အကောင့်ထဲသို့လူနာသူတို့ကိုယ်သူတို့များ၏အမြင်များအပါအဝင်အချက်များစွာ၏နံပါတ်ယူပါလိမ့်မယ်။ sarcoidosis များအတွက်ကုသမှုကိုမကြာခဏအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပြောင်းလဲ; ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများ-ups ကအကောင်းဆုံးကုသမှုအစီအစဉ်ကိုနောက်တော်သို့လိုက်လျက်ရှိသည်သေချာစေရန်လိုအပ်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
sarcoidosis များအတွက်ရရှိနိုင်လတ်တလောရောဂါလမ်းညွှန်ချက်များ WASOG အားဖြင့် 1999 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားလက်ရှိတွင်ဥရောပအသက်ရှုလမ်းကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအသုံးပြုပုံကုသမှုအပေါ်ပိုပြီးအလေးပေးအတူ updated လျက်ရှိသည်နှင့် SarcoidosisUK ဗြိတိန် sarcoidosis လူနာအမြင်များနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုယ်စားပြုတစ်ဦးလူနာအကြံပေး Group ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ဤအလမ်းညွှန်ချက်များမှပံ့ပိုးဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းဦးရာသီ 2018. ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါလိမ့်မည်။ သင်ဤစီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရနိုင်ပုံကိုအဘို့မျက်စိထုတ်ထားပါ။ အဆိုပါ NHS များတွင်အသုံးပြု sarcoidosis အဘို့အဘယ်သူမျှမတာဝန်ရှိသူတဦးကပြုစုစောင့်ရှောက်မှု Pathway လက်ရှိရှိပါသည် - SarcoidosisUK ထိုကဲ့သို့သောလမ်းညွှန်ချက်များ၏ဖန်တီးမှုအဘို့အ Nice စည်းရုံးနေကြပါတယ်။ အဆိုပါ BMJ ကိုလည်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေအချို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်လမ်းညွှန်ချက်ရှိပါတယ်။
ဆက်ဖတ်ရန်: WASOG လမ်းညွှန်ချက်များ (1999), အဖွင်ကုသမှုလမ်းညွှန်ချက်များ (စာစောင် 2019 ဘို့မှုကြောင့်), BMJ အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်
ပုဒ်မ 6: သုတေသန
အဘယ်အရာကိုတိုးတက်မှု sarcoidosis သုတေသနအစေခံသလဲ?
ကမ္ဘာတဝှမ်း sarcoidosis သုတေသနအချို့အားတက်စရာတိုးတက်မှုရှိပါသည်။ mTOR (ကအချက်ပြလမ်းကြောင်း) granuloma ၏တိုးတက်မှုကိုထိခိုက်နိုင်ကြောင်းအဆိုပါတွေ့ရှိမှုအသစ်သတင်းအချက်အလက် sarcoidosis များအတွက်အလားအလာကုသမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပုံကိုပိုကောင်းနားလည်သဘောပေါက်သို့အများအပြားနောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှုများမှဦးဆောင်လျက်ရှိသည်။
ဆက်ဖတ်ရန်: mTOR သုတေသန
သငျသညျအောက်က link ကို အသုံးပြု. ဗြိတိန်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအပါအဝင် sarcoidosis သို့ကောက်ယူလျက်ရှိသည်အခြားသုတေသနအကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါကထွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သုတေသနတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
ဆက်ဖတ်ရန်: ပါဝင် Get
ဗြိတိသျှအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှနှင့်အတူ ပူးပေါင်း. sarcoidosis သို့သုတေသန SarcoidosisUK ရန်ပုံငွေများထဲမှအဓိကအပိုင်းအစနှစ်စဉ်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး sarcoidosis သုတေသနကိုထောက်ပံ့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျအောက်က link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်နှင့်လက်ရှိသုတေသနစီမံကိန်းများအကြောင်းပိုမိုဖတျရှုနိုငျပါသညျ။
ဆက်ဖတ်ရန်: SarcoidosisUK သုတေသန
SarcoidosisUK ကမ္ဘာတဝှမ်းကတခြား sarcoidosis အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်, SarcoidosisUK ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တိုးနှင့် sarcoidosis များအတွက်ရောဂါပျောက်ကင်းကိုကူညီရှာဖွေပေးရန်ဗြိတိန်, ဥရောပနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့အများအပြားစည်းရုံးရေးအလောင်းတွေနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် SarcoidosisUK နှင့်ဆက်စပ်သို့မဟုတ်အင်္ဂါဖြစ်ကြောင်းကို မူလတန်းစောင့်ရှောက်မှုအသက်ရှုလမ်းကြောင်း Society က, ရှားပါးရောဂါဗြိတိန်, မျိုးရိုးဗီဇမဟာမိတ်ဗြိတိန်, ဗြိတိန် Thoracic Society က, WASOG နှင့် ဥရောပအဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နှင့်အတူအနီးကပ်အလုပ်လုပ်မိတ်ဖက်များ ဗြိတိန်အဆုတ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ.
အဆိုပါ SarcoidosisUK သုတေသနစီမံကိန်းများအဘယ်သူမျှမတိရိစ္ဆာန်များပါဝငျသညျ။
ဆက်ဖတ်ရန်: BLF သုတေသနသတင်းအချက်အလက်
လူနာ NHS မှကိုယ်တွင်းအင်္ဂါနှင့်သွေးလှူဒါန်းမှု sarcoiosis နိုင်သလား?
အဆိုပါ 100,000 Genomics စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက် sarcoidosis လား?
ကံမကောင်းစွာ sarcoidosis အဆိုပါ 100,000 ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မယ့်အခွအေနေမဟုတ်ပါဘူး Genomics Project မှ။ ဒေါက်တာရစ်ချတ်ဖြစ်သူ Scott, စီမံကိန်းမှာရှားပါးရောဂါများအတွက်လက်တွေ့ခဲ, said: "ဒီ 100,000 Genomics Project မှရှားပါးရောဂါ program ကိုဆိုလိုသည်မှာတစ်ခုတည်းမျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုကြိမ်မြောက်သည်အဘယ်မှာရှိ, ရိုးရှင်းသော '' monogenic '' မျိုးရိုးဗီဇအကြောင်းတရားများနှင့်အတူအခြေအနေများအပေါ်အလေးပေးအခြေအနေကို၏အီးအကြောင်းမရှိ။ sarcoidosis ၏အန္တရာယ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးအချို့မျိုးဗီဇအချက်များရှိပါသည်သော်လည်းအကြောင်းတရားများကျနော်တို့စီမံကိန်းအတွက်တာနေသောချဉ်းကပ်၏ဆုပ်ကိုင်အတွင်းပိုမိုရှုပ်ထွေးနှင့်မဖြစ်ထင်နေကြသည်ဖြစ်ပါတယ်။ "